Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 5,750 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
28 Jumada al-thani 1441 H
Taariikhdu Maata Waa 22 Febraayo 2020 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Baho Cadceedeed (ingiriis: Solar System) waa qoraxda, 8da meere, dayaxyo badan oo ku wareega meereyaasha, dhowr duniyar iyo tiro badan oo dhagaxaan, baraf iyo hawoooyin ah; kuwaas oo dhamaantood ku wareega qoraxda oo badhtanka ku taala. wareega qorax
Bahda Qoraxdu Midaysay waxay ka tirsan tahay nidaamka Galaagsiyada ee loo yaqaan The Milky Way. Waxaana la sheegaa in meerayaasha, dayaxyada, dunidayar iyo dhamaan walxaha ku jira bahdan ay sameeysmeen wakhti hada laga joogo 4.5 bilyan oo sano ka hor 4.5 bilyan oo sano ka hor
Inta ugu badan cufka iyo mugu waxaa laga dhex helaa qoraxda oo ugu weyn dhamaantood, iyo meeraha Cirjeex oo ugu weyn meerayaasha sideeda ah. Afarta meere ee u dhow qoraxda - Waxaraxir, Dusaa, Dhulka iyo Farraare - kuwaas oo loo yaqaano Meere Dhagaxley, waxay inta ugu badan ka samaysan yihiin bir.Afarta meere ee u dhow qoraxda - Waxaraxir, Dusaa, Dhulka iyo Farraare Dhinaca kale, afarta meere ee banaanka u baxsan ee loo yaqaano Neefaha Waawayn - Cirjeex, Raage, Uraano iyo Docay - kuwaas oo aad uga jidh iyo xajmi wayn meerayaasha dhagaxleyda ah, waxay ka samaysan yihiin neefo. Neefaha Waawayn - Cirjeex, Raage, Uraano iyo Docay
Labada meere ee ugu xajmiga wayn bahda midaysay qoraxdu, Cirjeex iyo Raage, waxay ka kooban jihiin curiyeha haydarojiin iyo hiliyaam, labada ku sii xiga ee Uraano iyo Docay waxay ka samaysan yihiin sheeyo dhalaali kara oo inta ugu badan ah baraf.
Saddex Illaahow Addaa Awood u leh:
B) Guursan maayeeyaanan goblamin. T) Xoogsan maayee xoollo isii *** J) Camal falli maayee caddaabta ha igeyn.
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 5,750 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin